Isikhathi Sengcebiso Evela ku-Semalt - I-SEO Tactics Ukuqwalasela
Xa kuziwa ekucingeni nge-SEO, izinto ezibini eziphambili ezithintela ingqondo yethu zingundoqo kunye ne-backlinks. Njengoko iGoogle iyaqhubeka nokuphucula ukuqonda komsebenzi wabantu, iqalise ezinye izicwangciso kwaye iguqule oko kuthethwa ngokuba yimiqondiso ebalulekileyo yokuma. Iinjongo ze- zokusesha ngoku zinika u-UX ingqwalasela enkulu ngangokunokwenzeka.
U-Ivan Konovalov, ilungu lezakhono ezivela kwi Semalt IiNkonzo zeDijariti, iqinisekisa ukuba ezi zixhobo zezobugcisa ziya kukuvumela ukuba usebenzise amaqhinga asekuhlaleni we-SEO - jeeves flipkart review.
Isicaciso # 1. Vula amaGrafu kumajelo asekuhlaleni
Kuye kwangqina ukuba iigrafu ezivulekileyo kwimidiya yoluntu zinokubaluleka kwaye zibhetele kunomxholo olula. Unokuba neqela le-Facebook elincinci elinamaphepha-posters. Ingcamango ikwabelana ngesithuba esithile esinamandla kwi-intanethi, kwaye ibizwe ngokuba yi-Open Graph. Ngenhlanhla, itholakale kubasebenzisi be-Twitter kunye ne-Facebook kwaye inokunyusa ukusebenza jikelele kwewebhusayithi yakho. Vula igrafu ikhupha kwi-content yomxholo wakho kwaye ibonakalise kwimidiya yoluntu ngokufanelekileyo. Inokukunceda ukuba ukhulise ukuma nokubonakala kwewebhusayithi yakho, kwaye iGoogle inokukhangela umxholo we-Open Graph ngendlela engcono.
Isicaciso # 2. Lungisa ifayile ye robots.txt
Xa izigulane ze-injini zosesho zikhangela kwiiwebhsayithi, zijonge kakhulu iifayile ze-robots.txt ngexesha le nkqubo. Kubalulekile ukuba ungabaniki umyalelo okhohlisayo. Ukuba uye waphawula i-traffic engacaciswanga, kufuneka uhlole iifayile ze robot.txt, ukuqinisekisa ukuba zichanekile. Ngaphezulu, unako ukulawula indlela iinjongo zokukhangela i-website yakho kunye namaphi amaphepha akufanele ahlawulwe ngenxa yexabiso eliphantsi..Ngamanye amagama, singatsho ukuba kufuneka ulungise iifayile zakho zeerobhothi.txt kwaye umise ugaxekile kunye ne-bots ukushaya amaphepha akho.
Isicaciso # 3. Iimpawu zentloko zinceda iGoogle ukuqonda iwebhusayithi yakho
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba i-tags ehamba phambili inceda iinjongo zokukhangela ziqonda indawo yakho ngendlela engcono. Umxholo wakho ochaphazelekayo kunye nolwaziyo, kukulula kuba iinjini zokukhangela ukulubeka kunye namava angcono abasebenzisi abaya kuba nawo. Iinjongo zophando ngokukhethekileyo iGoogle ziyazi xa abasebenzisi bebukela umxholo wewebhusayithi, bayivuza ngokufanelekileyo. I-Google inokwandisa indawo yakho yesayithi kuphela xa ingxelo ye-UX ikulungele kakuhle. Qinisekisa ukuba usebenzisa amacwecwe enkcazo kwaye uyakunceda i-Google ukutshintshisa kwaye isalathise indawo yakho.
Iqhinga # 4. Sebenzisa izixhobo zomlawuli ze-Google
Iinkonzo zewebhu ze-Google zingasetyenziselwa ukunceda iwebhusayithi yakho isebenza ngcono kunanini ngaphambili. Ikhuthaza izicwangciso zakho ze-SEO ngokubanzi. Izixhobo ezifana ne-Google's Search Console zingasetyenziswa rhoqo. Ezi zixhobo zikunceda ukuba uqaphele indlela indawo yakho idibene ngayo kwaye inike iinkcukacha malunga nezicwangciso zakho ze-SEO. Unokufumana inzuzo yeenkonzo ze-Google zamahhala kwaye uthumele i-sitemap ngqo kwiinjini zokukhangela. Oku kuya kubavumela ukuba baqulunqe iphepha lakho lewebhu ngokukhawuleza, kwaye akudingeki ukuba ulinde ixesha elide.
Iqhinga # 5. Hlola iifowuni zangoku kunye nezibuyekezo
Kufuneka uhlale unamehlo kwiiplagizi zamva kunye nezifundo. Qinisekisa ukuba isivinini sakho sewebhu, ukuhamba, ukuyila, kunye nokubonisa kuya phezulu kumakethi kwaye kufaka izinto zokujonga izinto zeGoogle. Phantse zonke iinkampani ze-website zokubamba izibuyekezo zihlaziye izibonisi zabo kunye neefowuni rhoqo. Kufuneka wenze okufanayo ukuba ufuna ukukhulisa i-UX yesayithi, ukuphucula ukusebenza kwayo yonke nokubonakala kwayo.
Isicatshulwa # 6. Ukulungiselela ngokukhawuleza: I-Google ne-Facebook
I-Facebook i-Instant Articles, i-Apple News kunye ne-Google AMP zixhobo eziphambili kunye nezikhokelayo kwi-intanethi, ethembisa indlela yokubandakanya kunye necocekileyo kwiwebhusayithi yakho nokuphucula ixesha lokulayisha ngokubanzi.
Abasebenzisi abangeke bahanjiswe kude ne-Facebook xa bacofa kulawo maqhagamshelwano, kodwa umxholo wewebhusayithi yakho uboniswa kwifomati ekhangayo. Abaninzi abavakalisi bayasebenzisa le ndlela kunye nokwandisa indawo yabo yesitratti, ukuphucula i-injini yayo yokukhangela.
Ukuba usebenzisa zonke izicwangciso okanye ukhethe enye yazo, uya kubona ukuba isayithi lakho lifumana uphuculo lweenjini zenjini.